युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? जानी राखौं ! « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी – युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अङ्गमा आखा जान्छ ? भनेर गरिएको एक सर्बेक्षण मा युवतीहरुको जबाफ सुनेर सब च’कित पर्ने एक तथ्य सार्बजनिक भएको छ। धेरै युवती हरुले सर्बप्रथम पुरुषको प्रसनालिटिमा आखा जाने बताएका छन्।
उनीहरुले पुरुष संग भएको भौतिक सुख वा आवरणमा देखिएको कुनै पनि बस्तु संग आकर्षक हुदैनन्। महिला हरुले कुनै पनि पुरुष संग नजिक हुनु भन्दा पहिले पुरुषका अनिबानि चाल चलन र उसको बिचारमा महिला ध्यान जाने गर्दछ नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
सायद पि’तृसतात्मक सोंच-चि’न्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् ।
१० जनालाई अन्धो बनाएर त ड्पाएर मा रियो, ह त्या राको ब यान सुन्दा पुलिस नै ड रायो